युगसम्बाद साप्ताहिक - ‘आणविक अस्त्र’ : त्राससंगै उत्पादको होडबाजी
Tuesday, 04.07.2020, 09:43am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 05.24.2011, 06:24am (GMT+5.5)
दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासकी शहरमा आणविक बम प्रहार ग¥यो । त्यो बमले कैयौं लाख नागरिकको ज्यान गयो । यसको असर अहिले पनि परिरहेको छ । यो युद्धपछि जापानले आणविक हतियार नबनाउने कसम मात्र खाएन अमेरिकासंग त्यस्तै सम्झौता पनि ग¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि जापानले ऊर्जाका लागि आणविक केन्द्रहरूको निर्माणमा तीब्रता दियो । जसको परिणाम केही महिनाअघि गएको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीका कारण आणविक केन्द्रबाट विकिरण चुहावट भयो । यसको असर जापानको अर्थतन्त्रमा समेत प¥यो । भूकम्प र सुनामीकोभन्दा कैयौं बढी चिन्ता आणविक केन्द्रमा भएको चुहावटले निम्त्यायो । जापानको पछिल्लो दुर्घटनाले आणविक केन्द्रहरू जतिसुकै सुरक्षित छन् भन्ने दावी गरिए पनि यसले कुनै पनि क्षण विनाशलिला निम्त्याउँछ भन्नेमा कसैको शंका छैन । यति हुँदाहुँदै पनि आणविक केन्द्रका बारेमा कमै मात्र सूचना प्रवाह हुने गरेका छन् । जति सूचना प्रवाहित हुन्छन्, त्यो भ्रममा आधारित हुन्छ ।
जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम प्रहार गरिएपछि जापानले शान्तिको बाटो रोज्यो र आर्थिक–सामाजिक उन्नतिमा विश्वकै लागि नमूना मुलुक बन्यो । जापानमा आणविक बमले मच्चाएको विनाशको सो घटना देख्ने, सुन्नेहरू अहिले पनि आणविक हतियार बनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । विश्वका शक्तिराष्ट्रको आणविक हातहतियारको
होडबाजीका कारण अविकसित राष्ट्रहरूले ठूलो मार खेपिरहेका छन् र ती मुलुकहरू असुरक्षित हुन थालेका छन् । युद्धजन्य परिस्थितिको वृद्धि भएको छ । अमेरिकाले एउटा बिन लादेनलाई मार्न ३० खर्ब डलरभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुप¥यो । त्यति रकमले विश्वका आधा भोकमरी पीडितलाई कति समयका लागि खाद्यान्न पु¥याउन सकिन्थ्यो ? यसको लेखाजोखा भविष्यमा हुँदैगर्ला ।
यसैबीच राजधानीमा गत साता गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार छनौट समितिले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो पुरस्कार प्राप्त गर्ने जापानको हिरोसिमाका पूर्वमेयर तदाकोसी अकिवा र नागासाकीका मेयर तोमिहिसा ताउएले विश्वको आणविक अस्त्र बनाउने होडबाजी रोक्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्क क्षेत्रमा नै सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार मानिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार विजेता उहाँहरूले आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूमा गौतमबुद्धको उपदेशको रचनात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै जापानको दर्दनाक घटनाबाट विभिन्न मुलुककले पाठ सिकेर यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आणविक हतियाररहित विश्व बनाउने अभियानका लागि आफूहरू सधंै प्रयासरत रहने बताउँदै उहाँहरूले नेपालका सर्वसाधारण जनताले पनि सो अभियानमा भाग लिन आव्हान पनि गर्नुभयो । उहाँहरूले जापानले आणविक हतियारबाट जुन पाठ सिकेको छ त्यो विश्वका शक्ति मुलुकहरूले नसिकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदा नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने समस्याका बारेमा कमै मात्र चर्चा हुने गरेको छ । आणविक हतियारको प्रयोग मात्र होइन, यसको रेडियोधर्मी विकिरण चुहावट भयो भने पनि त्यसबाट ठूलो विनाश हुने विज्ञहरूको दावी छ । नेपाल जस्ता गरिब मुलुकका लागि आणविक अस्त्रले सज्जित दुई मुलुक भारत र पाकिस्तानबाट शतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ । यी दुई मुलुकबीचको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले कुनै पनि बेला युद्ध हुनसक्ने भय मडारिइरहेको छ । यदि भारत र पाकिस्तानले आणविक अस्त्र प्रयोग गरे भने यसको असर नेपाल मात्र होइन, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा समेत पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ ।
आणविक अस्त्रको विकासले विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम शक्ति राष्ट्रहरूले हटाउनुपर्छ । अरु मुलुकमा प्रयोग गरिने अस्त्रले आफ्नै मुलुकलाई पनि असर गर्छ भन्ने ताजा उदाहरण जापानमा भएको आणविक केन्द्र विस्फोटले नै देखाइसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूका आणविक केन्द्र विस्फोट भएमा वा त्यहाँबाट रेडियोधर्मी विकिरण चुहिएमा पहिलो असर सोही मुलुकलाई पर्छ र त्यसपछि मात्र बाँकी मुलुकमा । त्यसकारण विश्व शान्तिका लागि प्रयासरत संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता निकायले आणविक हतियार मात्र होइन कुनै पनि प्रकारका हातहतियार निर्माण र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ ।
एउटा हातले हतियार बेचेर अर्को हातले शान्तिको सन्देश दिने काम अहिले शक्ति राष्ट्रहरूले गरिरहेको छन् । योभन्दा ठूलो नौटंकी अर्को केही छैन । हतियारको व्यापारबाट धनी बनेका मुलुकहरूले अरुलाई हतियार बनाउन नदिने र हतियारको व्यापारमा आफ्नो एकलौटी खोज्ने प्रवृत्तिले विश्वका अनेक कुनामा युद्धको भय मडारिइरहेको छ ।
आणविक हतियार मात्र होइन कार्यक्रम नै असुरक्षित र अशान्तिको प्रतीक बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरू आफ्नो आणविक कार्यक्रम बढाउँदै लाने र अरुलाई त्यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न नदिने नीतिमा रहेका छन् । यो उनीहरूको विश्वलाई एकलौटी रुपमा आफ्नो प्रभावमा राख्ने रणनीति मात्र हो । अरुलाई त्यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न नदिनेले आफू पनि कटौती गर्दै जानुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । उत्तर कोरिया, इरान लगायतको आणविक कार्यक्रमले विश्व शान्तिलाई खलल पु¥याएको दावी गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरू उनीहरूको आणविक कार्यक्रम विस्तारले चाहिं कसरी शान्ति स्थापनामा मद्दत ग¥यो ? भन्न सक्दैनन् । आफूहरूको ठीक र अरुको गलत भन्ने मान्यताकै कारण आणविक अस्त्रले जति त्रास फैलाइरहेको छ यसको उत्पादनमा पनि सोही अनुसार बढोत्तरी आइरहेको छ । अहिलेको चिन्ता नै यही हो ।